Lammaane labadooda gacmoood isku katiinadeeyay si ay u “ilaaliyaan” jaceylkooda balse iminka kala tagay: SAWIRRO – Calanka.com
Lammaane labadooda gacmoood isku katiinadeeyay si ay u “ilaaliyaan” jaceylkooda balse iminka kala tagay: SAWIRRO
in Dibedda, Layaabka
Lammaane ka soo jeeda dalkaasi Ukrain islamarkaana laguna kala magacaabo Alexandr Kudlay iyo Viktoria Pustovitova ayaa sameeyay dhacdo lala yaabay kadib markii ay sil-silad isugu xireen labadooda gacmood si ay u ilaaliyaan jaceylkooda ayaa iminka kala tagay oo silsiladdii jaray.
14-kii biasha febraayo ayaygacmohooda isku xireen, waxaana ay ku khasnabaayeen in midba midka kale uu u raaco meel alle iyo meeshii uu u kacayo, sida suuliga, jikada, sariirk iyo bannaankaba.
Lammaanahan ayaa nolol-maalmeedkooda bulshada kula wadaagi jiray baraha bulshada, iyagoona soo dhigi jiray sawirro iyo muuqaallo video ah.
Waxay arrintu socotaba, afar bilood kadib jacelkii la ilaalinayay ayaa isu badalay kala xiiso-dhig, waxaana ay lammaanuhu ku heshiiyeen in ay gacmohooda kala furtaan islamarkaana ruux walba uu noloshiisa raacdo.
Viktoria Pustovitova ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay in ay arrintani ka barteen cashar, iyagoona uga digay “lammaanayaasha is jecel” in ay sameeyaan khaladkii ay iyagu sameeyeen si ay u ilaalsadaan jaceylkooda.
Munaasabaddii “silsilad-jarka” ayay labaduba sheegeen in ay u xiiseen in ay keli iyo “xor” kala madax-bannaan noqdaan.
” – Waan isku xirneyn saacad kasta, maalin kasta. Wax tixgelin ah kama heli jirin sababtoo ah waan isku daalnay oon kala xiiso dhignay”, ayay tiri mar kale Viktoria.
Ninka ayaan isagu ka qoomameyn dhacdada, waxaana uu shegay in uu baaris ku jiray uuna ku ogaaday in ruuxna-ruuxa kale uusan ku xirnaan karin, waxa uuna intaa raaciyay in saaxiibtiis ay dhan walba ku kala duwanaayeen.
Hal wax ayay ka faa`iideen, waana in ay dhigeen rikoor aysan cidi horay u dhigin.
Lammaanaha iminka kala tagay ayaa qorsheynaya in ay gadaan sil-siladda ay iska fureen, wixii ay ka helaana ay “sadaqeysan” doonaan.